2017 SANADKII KALA FOGAANSHAHA IYO KAFTANKA SIYAASIYIINTA SOMALI LAND : Salaan Media
2017 SANADKII KALA FOGAANSHAHA IYO KAFTANKA SIYAASIYIINTA SOMALI LAND
cabdikhaaliq diiriye | January 3, 2018
1.Waddani Iyo Guushii Oo Kala Fogaaday
Maxamuud Xaashi Iyo Madaarkii Oo Kala Fogaaday
Qabo Iyo Wasiirnimadii Oo Kala Fogaaday
Baashe Cawil Iyo Danihiisii Gaarka Ahaa Oo Kala Fogaaday
5.wasiiradii hore qaar iyo Muuse oo kala fogaaday
Alle ayaa mahad leh sanadkii 2017 inoogu dhameeyey nabad iyo deggenaansho guud(ciddii dhib gaar ahi ay soo gaadhay Allah ha uga gargaaro samirna ha ugu deeqo)
Sidaas oo ay tahay, haddana Somaliland iyo meelo badan oo addunka ah waxa sanadkii 2017 ee dhamaaday ka dhacay kala fogaansho ku timi dawlado, bulshooyin iyo dad gaar ahba. Waxa kale oo kala fogaaday dad iyo himiladoodii. Dad iyo hantidoodii. Dad iyo hawlahoodii.
1 Quluubta bulshada oo kala fogaatay doorashadii darteed
2 Waddani iyo guushii oo kala fogaaday.
3 Wasiiradii hore qaar iyo Madaxweyne Muuse oo kala fogaaday
4 Somaliland iyo hawadeedii oo kala fogaaday.
5 Doolarka iyo Somaliland Shilling kii oo kala fogaaday.
6 Maayarka Hargeisa iyo shicibkiisii qayb oo kala fogaaday.
7 Bileyskii iyo dhallintii oo kala fogaaday
8 Maxamud xaashi iyo madaarkii Cigaal oo kala fogaaday
9 Muj. Maxamed Kahin iyo Guddoomiyenimadii Kulmiye oo kala fogaaday
10 .Xiddigaha geeska iyo abwaan Laab-saalax oo kala fogaaday.
11 Cali-mareexaan iyo dhulkii dawladda oo kala fogaaday
12.Qabo iyo wasiirnimadii oo kala fogaaday
13 Baashe Cawil iyo danihiisii gaarka ahaa oo kala fogaaday
14 Xildhibaan Nacnac iyo madaxtooyadoo oo kala fogaaday
*Madaxweynahu wuxuu si xawliya u bilaabay isku soo dhoweynta bulsho.
Farmaajo iyo Hawiyihii baa kala fogaaday.
Farmaajo iyo Maamul Goboleedyadii baa kala fogaaday.
Oromadii iyo Somalidii Ethiopia ayaa kala fogaaday.
1.dadkii baa kala fogaaday oo si xun u qaybsamay.
Madaxweyne Robert Mugabe iyo xisbigiisii baa kala fogaaday oo xukunkii ka qaaday.
1.Madaxweynihii iyo dimuquraadiyaddii baa kala fogaaday.
Xukuumaddii iyo kiniisadahii baa kala fogaaday.
Madaxweyne Zuma iyo xisbigiisii ANC baa kala fogaaday. In xilka laga xayuubiyo ayuu qarka u saaran yahay.
Masar iyo Sudan baa kala fogaaday.
Tunis iyo UAE baa kala fogaaday.
Saudi Arabia,UAE,Masar,Bahrain iyo Qadar iyo Turkiga baa kala fogaaday.
Xuutiyiintii iyo Cali Cabdale Saalax ayaa kala fogaaday.
Lubnaan iiyo Saudi Arabia ayaa kala fogaaday.
Turkiga iyo NATO kala fogaaday
USA IYO Dawladaha addunka badidoodaa kala fogaaday.
Falastiinidii iyo Quddus baa kala fogaaday.
« Daawo Muqaal:Masuulyiin Talo U Soo Jeediyay Wasiirka Cusub Ee Wasaarada Ciyaaraha..02.01.2018
Daawo Muqaal:Qosol 89 Kaftanka Siyaasada Wixii ugu yaab Badnaa 2017,Farmaajo Madaxweynaha Ugu..Jan .01.18 »